TAARIIKHDA MAANTA: | DAABACADA WARKA: Apr 22, 2003
Ø Ciidamada gumaysiga Itoobiya oo dad xidhxidhay. Ø Baarlamaanka Maraykanka oo siyaasada Itoobiya dhalliilay. Ø Rabshado ka billowday gobolka Woqyooyi Galbeed ee Soomaaliya.
Ø Masuuliyiin EPRDF ah oo laga mamnuucay inay dalka dibada uga baxaan.
Ø Ragii ugu dhadhawaa kaligii taliye Meles oo ka dhaqaaqay.
Ø Suugaan wadani ah iyo waliba waxyabo kale oo aad ka heli doontaan.
Ciidamada gumaysiga Itoobiya oo dad xidhxidhay.
Ciidamada dulmiga ku dhisan ee gumaysiga Itoobiya ayaa dad farabadan ku xidh xidhay goobahan soo socda.
11.04.2003 waxay Ciidamada dulmiga ku caanbaxay ee gumasiga Itoobiya ku xidh xidheen Magaalada Qabri Dahare dad shacab ah oo aan waxba galabsan, dadkaas oo la rumeeysan yahay in ayna wax danbi ah lug ku leheen, ayay Ciidamada Itoobiya u xidh xidheen si ay lacag uga helaan waxaana ka mid ah dadkaas.
1- Faarah Cabdulaahi Yuusuf.
2- Bashiir Cali Saciid.
3- Cali Badel Mohamed.
4- Hudle & Bashiir, oonaan magacyadooda oo buuxa haynin.
Waxay kalooy Ciidamada Gumaysiga Itoobiya xabsiyada Dagmooyin ka tirsan Gobolka Nogbeed u taxaabeen dad Shacab ah oo aan waxba galabsan, dadkasna waxaa ka mid ah.
1- Faarah Bedel Yuusuf.
2- Mohamed weli Cabdi
3- Cabdi-rezaaq Muxumed xussein
4- Mohamed Qorane Mursal
5- Bishaar Cabdi Raage.
6- Ardo Nuuriye Aaden.
7- Mohamed Haybe Cabdi,
8- Taajir Cabdi Mursal.
Sidoo kale waxay Ciidamada Nolol diidka Gumaysiga Itoobiya xabsiga ay ka sameeysten Magaalada Farmadaw u taxaabeen dadkan kala ah.
1- Deeq Mohamed.
2- Qoor-gaab Muxumed Maxamed.
Ø Baarlamaanka Maraykanka oo siyaasada Itoobiya dhalliilay.
Gudidga Xidhiidhaka Caalamiga ah ee baalmaanka Maraykanka ayaa si wayn u canbaareeyay xukuumada Itoobiya ee wayaanahu uu ka taliyo, wuxuuna Guddigu sheegay in dhaqaalihii loogu talagalay in lagu caawiyo dadka abaaruhu wax-yeelleeyeen ay xukuumadu ku soo gadato hub casri ah, taasina ay caddayn u tahay in maamulka wayaanuhu uu yahay mid musuqmaasuq ku dhisan.
Guduiga xidhiidhka caalamiga ah ee baarlamaanka Marykanku wuxuu shir uu dhawaan isugu yimid ku sheegay in abaaraha ku habsaday qaarada Afrika, gaar ahaan wadanka Itoobiya, oo had iyo jeer ay abaaruhu ku soo noqnoqonayaan, ay sabab u tahay siyaasad xumida iyo musuqmaasuqa ka jira xukuumadaha dalalkaas, gaar ahaan xukuumada Itoobiya.
Ninka masuulka ka ah hay’adda horumarinta maamulka caalamiga ah ee Marykanka, oo lagu magcaabo Mr. Andrews Nastyos, ayaa sheegay in loo baahan yahay in xukuumada Itoobiya ay baddasho siyaasada ay ku dhaqanto, wuxuu kaloo intaas raaciyay in dhibatada Itoobiya haysata ayna xal u ahayn in had iyo jeer la quudiyo.
Ø Rabshado ka billowday gobolka Woqyooyi Galbeed ee Soomaaliya.
Dhowr qof ayaa ku dhawacmay banaanbaxyo iska soo horjeeda oo ka dhacay Hargaysa, ka dib markii ay soo baxday natiijada doorashada madaxtinimada maamulka Waqooyi Galbeed.
Daahir Riyaale Kaahin, oo haatan madax u ah maamulka Waqooyi Galbeed, ayaa la sheegay in uu ka guleeystay Axmed Maxamed Silaanyo oo isna diiday natiijada dooarashada.
Wararka ka imaanayo magaalada Hargaysa iyo magooloyin kale oo ka tirsan Waqooyi Galbeed ayaa sheegaya in rabshaduhu ay fideen, ayna jiraan dad fara badan oo xidhxidhan iyo kuwa kale oo dhaawacan. Waxaa la burburiyay makhaayad shaaha laga cabo oo ku taala Magaalada Hargaysa, halkaasoo ay afar qof ku dhawacmeen ka dib markay isku dheceen tageerayaasha Kaahin iyo Silaanyo.
Dhinaca kale dowladda Itoobiya ayaa si wayn u danaynaysa arrimaha doorashada ee maamulka Woqooyi Galbeed, waxayna labada dhinac kula jirtaa kulano kala duwan, waxaana haatan magaalada Hargaysa ku sugan Generaal ka tirsan ciidanka sirdoonka Itoobiya oo loo diray in uu si gaar ah isha ugu hayo siyaasada gudaha ee maamulka Woqooyi Galbeed.
Kadib markii uu qas iyo lab mar labaad ka dhex billaabmay dawlada wayaanahu ka taliyo ee Itoobiya ayaa 13 qof oo ka tirsan golaha dhexe ee EPRDF la sheegay in uu kaligii taliye Meles Zenawi ku amray wasaarda arimaha dibada in laga mamnuuco inay wadanka dibada uga dhoofan, waxaana magacyadooda la dhigay garoonada dayuuradaha ee wadanka oo dhan, sidaas waxaa qoray jaraa’idka lagu magacaabo Mogad.
Isku dhac qallafsan ayaa ka dhex socda xubnaha EPRDF, oo isku khilaafsan siyaasada cabudhinta ah ee keligii taliye Meles Zenawi dalka ku dhaqayo, wuxuna khalaafkaasi sii xoogaystay, ka dib markii uu soo baxay go’aankii kama denbaysta ahaa ee soohdinta u dhaxaysa labada dal ee Itoobiya iyo Eritereya oo magaalada Bademe raaciyay dhinaca Eritereya, kaasoo Itoobiya ay ku gacan saydhay.
Arrinta Bademe waxay sii calwisay siyaasada xukuumada Itoobiya, oo markii horaba murugsanayd, waxayna sheegayaan warar lagu kalsoon yahay in keligii taliye Meles Zenawi uu arrintaas darteed u kordhiyay wardiyihiisii gaarka ahaa, isagoo ciidamo si wayn loo tababaray ku wareejiyay labo xaruumood oo ku yaalla magaalada Addis Ababa, kuwasoo uu u badan yahay.
Waxaa kaloo si wayn loo sii adkeeyay daba-galka lagu hayo mucaaradka ka dhex abuurmay xukuumada wayaanaha dhexdeeda, sida ninka lagu magacaabo Twelde iyo ururrada mucaaradka xabshida.
Madaxwaynaha gobolka Tigreega Tsegaye Berhe iyo ku xigeenkiisii Abadi Zemu, oo lagu tirinayay inay daacad u yihiin kaligii taliye Meles Zenawi, ayaa arrinta Badame awgeed cidla uga dhaqaaqay Meles Zenawi.
Waxayna arrintaasi ka denbaysay, ka dib markii uu Meles Zenawi Labadaas nin shir dagdag ah ugu yeedhay, si uu ugala tashado arrinta qaska keentay ee Bademe.
Madaxwayne ku sheegga gobolka Tigreega Tsegaye Berhe ayaa yidhi; Dadka Tigreega ah lagama dhaadhicin karo in magaalada Bademe ay Eritereya leedahay, wuxuu kaloo intaas raaciyay, anigu xaataa shaqsiyan arrintaas ma aaminsani.
Ku xigeenkiisa oo lagu magacaabo Abadi Zemu ayaa isagu wuxuu tilmaamay in cadaaladu ay tahay in magdhow fara badan la siiyo dadkii ay carruuruhu kaga dhinteen dagaalladii Eritereya lala galay.